တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ နယ်ပယ်စုံတွင် လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရန် ကတိပြု - Xinhua News Agency
စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ (ဝဲ) နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဗီဗီယန် ဘာလားကရစ်ရှန်တို့ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က တွေ့ဆုံနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
စင်ကာပူ၊ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံကြား နယ်ပယ်များစွာ၌ လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်စေရန် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က ကတိပြုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဗီဗီယန် ဘာလားကရစ်ရှန် (Vivian Balakrishnan) နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက တရုတ်နှင့် စင်ကာပူ နိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အပြန်အလှန် နားလည်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အဓိက အလေးထားဆောင်ရွက်စဉ် နှစ်နိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် အသီးအပွင့်ရလဒ်များလည်း ရရှိခဲ့ပါကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်သွယ်ရေး မြှင့်တင်ရန်၊ လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိင်းစေရန်၊ အခက်အခဲများကျော်လွှားရန်နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး စစ်ပွဲကို ဆောလျဉ်းစွာ အောင်နိုင်ရန်၊ သို့မှသာ တစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ စီးပွားရေး အလျင်အမြန်နာလန်ထူရေး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အပြုသဘောဆောင်သည့် ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံတို့သည် အဆင့်မြင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ COVID-19 ရောဂါပူးတွဲကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး ခိုင်မာခြင်းနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဖိအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံတို့သည် အရည်အသွေးမြင့်မြင့်ဖြင့် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ ပူးတွဲတည်ဆောက်ရေး ရှေ့ဆက်အကောင်အထည်ဖော်ရေး တွန်းအားပေးရန်၊ ကုန်း-ရေ နှစ်သွယ် လမ်းကြောင်းသစ်၏ အခန်းကဏ္ဍကို အပြည့်အဝပါဝင်မှု ပေးရန်၊ လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကုန်း- ရေနှစ်သွယ် လမ်းကြောင်းသစ် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ E-commerce စီးပွားရေး၊ ဉာဏ်ရည်တု၊ မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု (mobile payment) နှင့် big data အပါအဝင် နယ်ပယ်များတွင် အလားအလာရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တွန်းအားသစ် ဖြည့်စွက်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဝမ်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးအား မြင့်မားသောအဆင့်သို့ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် တရုတ်နှင့် အာဆီယံကြား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားပွဲများ ကောင်းစွာပြင်ဆင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စင်ကာပူအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး (RCEP) အား ဆောလျင်စွာဝင်ရောက်ရေး တွန်းအားပေးရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဝမ်က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့သည် ရှင်းလင်း ပွင့်လင်း၍ မိတ်ဆွေကဲ့သို့သော ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို စင်ကာပူနိုင်ငံအား ကူညီပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘာလားကရစ်ရှန်က ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့် အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းရန် အမြဲတစေ အသင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံကြား ဆက်ဆံရေး၌ တွန်းအားသစ်ဖြည့်တင်းရန် အာဆီယံ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု ၂၀၂၅ ဆိုင်ရာ မဟာစီမံကိန်းနှင့်အတူ ကုန်း-ပင်လယ်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အစီအစဉ်ချိန်ညှိရေး ကြီးမားသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ဆောင်ရွက်သွားလိုကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးသည် အခြေခံကျ၍ ဘက်စုံပါဝင်မှုရှိပြီး မဟာဗျူဟာမြောက် အရေးပါမှုအဖြစ် မှတ်ယူထားသည့်အားလျော်စွာ ယခုနှစ်သည်လည်း ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပြည့်မြောက်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် တည်ငြိမ်၍ ခိုင်မာသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေး တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ဘာလားကရစ်ရှန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသည် တောင်တရုတ်ပင်လယ် အပြုအမူဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် (Code of Conduct) အရှိန်မြှင့်တင်ရေးကို ထောက်ခံလျက်ရှိပြီး RCEP သဘောတူညီချက်ကို ဆောလျင်စွာ အသက်ဝင်ရေးကိုလည်း အားပေးလျက်ရှိကြောင်း ဘာလားကရစ်ရှန်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် စင်ကာပူနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ခိုင်မာစေရန်၊ ကမ္ဘာကြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
SINGAPORE, Sept. 13 (Xinhua) — China and Singapore pledged here Monday to deepen pragmatic cooperation between the two countries in multiple sectors.
While meeting with Singapore’s Minister for Foreign Affairs Vivian Balakrishnan, visiting Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said China and Singapore have enjoyed mutual understanding and mutual trust in the development of bilateral relations.
China is willing to join hands with Singapore to promote strategic communication, deepen pragmatic cooperation, overcome difficulties and meet challenges, and win the war against the pandemic at an early date so as to push forward the speedy recovery of each other’s economy and make positive contribution to peace and development of the region and the world at large, Wang said.
For his part, Balakrishnan said China and Singapore have maintained an open, candid and friend-like relationship, and Singapore is grateful for China’s provision of COVID-19 vaccines to his country.
He said Singapore would like to make greater efforts to align China’s plan for the new land-sea route with the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025, so as to inject new impetus into the ties between the two countries.
He noted that Singapore is willing to work with China to stick to multilateralism in addressing new problems and challenges, inabid to push for the sustainable development of the world. Enditem
Photo : Visiting Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi (L) meets with Singapore’s Minister for Foreign Affairs Vivian Balakrishnan in Singapore, on Sept. 13, 2021. (Xinhua/Then Chih Wey)